Jenezy 21 - Ny Baiboly
22Tamin'izany andro izany, Abimeleka narahin'i Fikola, filohan'ny tafiny, niteny tamin'i Abrahama hoe: Omban'Andriamanitra hianao amin'izay rehetra ataonao. 23Koa mianiàna amiko eto amin'ny anaran'Andriamanitra fa tsy hamitaka ahy, na ny zanako, na ny zafikeliko hianao, fa ho araka ny soa nataoko taminao no mba hataonao amiko sy amin'ity tany onenanao koa. 24Hoy Abrahama: Hianiànako izany. 25Nanome tsiny an'i Abimeleka anefa Abrahama, fa nisy lavaka fantsakana anankiray nanaovan'ny mpanompony an-keriny. 26Hoy ny navalin'i Abimeleka: Tsy mahalala izay nanao izany aho; fa hianao tsy nampandre ahy, izaho tsy nandre izany raha tsy vao izao. 27Dia naka ondry aman'omby Abrahama, natolony an'i Abimeleka ka nifanao fanekem-pihavanana izy roa lahy. 28Ary nanavaka ondrivavy kely fito tamin'ny biby fiompiny Abrahama. 29Ka hoy Abimeleka taminy: Inona ireo ondrivavy kely fito navahanao ireo? 30Hoy ny navaliny: Horaisinao avy amin'ny tanako ireo ondrivavy kely fito ireo mba ho vavolombelona ho ahy fa izaho no nihady io lavaka fantsakana io. 31Izany no nanaovana io toerana io hoe Bersabea, satria teo izy roa lahy no samy nianiana. 32Nanao fanekem-pihavanana tao Bersabea izy ireo. Rehefa vita izany dia niainga Abimeleka sy Fikola, filohan'ny tafiny, ka niverina ho any amin'ny tanin'ny Filistìna. 33Namboly tamarisa tao Bersabea Abrahama, ary niantso ny anaran'ny Tompo Andriamanitra mandrakizay teo izy. 34Naharitra ela no nitoerany tany amin'ny Filistìna. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0880 seconds